बाटोमा हिँड्दा हिड्दै पैसा भेटियो ? दिन्छ यस्तो कुराको संकेत - pnpkhabar.com
You are at:Home»धर्म/दर्शन»बाटोमा हिँड्दा हिड्दै पैसा भेटियो ? दिन्छ यस्तो कुराको संकेत
बाटोमा हिँड्दा हिड्दै पैसा भेटियो ? दिन्छ यस्तो कुराको संकेत
By रिता घिसिंग on १४ माघ २०७४, आईतवार ०५:४८ धर्म/दर्शन
एजेन्सी : कयौँपल्ट बाटोमा हिँड्दा हामीहरुले बाटोमा रुपैँया वा सिक्का भेट्टाउने गछौँ । कसैले भेटिएको पैसा आफैँसँग राख्छन् त कसैले दान गर्छन् । ज्योतिषशास्त्रले भने बाटोमा भेटिएको पैसाको कारण र संकेत बताएको छ । त्यसोभए बाटोमा पैसा भेटिए के हुनसक्छ त त्यसको मतलब ?
ज्योतिषका अनुसार सडक वा बाटोमा पैसा भेटियो भने यसको अर्थ तपाई निकै नै महत्वपूर्ण हुनुहुन्छ । यसका साथै यस्ता व्यक्तिलाई निकै मनकारी व्यक्तिको रुपमा मानिन्छ ।
यदि बाटोमा सिक्का भेटियो भने यदि तपाईले बाटोमा सिक्का भेट्टाउनु भयो भने ज्योतिषको अनुसार यो एक नयाँ जिन्दगीको सुरुवातको संकेत हुन्छ । मानिन्छ कि तपाईलाई सफलता मिल्नेवाला छ र तपाईसँग सकारात्मक घटना घट्नेछ ।
सडकमा रुपैँया भेटियो भने यदि तपाईलाई सडकमा रुपैँया भेटियो भने सम्झनुहोस् कि तपाईको जीवनमा सही बाटो रोज्नुभएको छ र त्यसमै अघि बढ्दा राम्रो हुनेछ ।